Sida Loo Dardar Geliyo Dheef-shiid kiimikaadkaaga: Ku Gubo Kaloriyo Badan Talooyinkan | Ragga Stylish
Ma rabtaa inaad ogaato sida loo dedejiyo dheef-shiid kiimikaadkaaga? Dheef-shiid kiimikaad si buuxda u shaqeynaya ayaa fure u ah luminta miisaanka, iyo sidoo kale ka ilaalinta.
Kuwa soo socdaa waa xeeladaha ugu wax ku oolka ah ee la isku dayo haddii aad ogaato taas, in kasta oo aad dadaalkaaga ugu wanaagsan sameyso, heerka uu jirkaagu ku gubto kalooriyada ayaa aad u gaabis ah. Sii dheef-shiid kiimikaadkaaga xoogaa xoojin ah talooyinkan!
1 Maxay dheef-shiid kiimikaadaygu gaabis u yihiin?
2 Istaraatijiyadaha lagu dedejinayo dheef-shiid kiimikaadka
2.1 Kordhi jimicsigaaga jimicsiga
2.2 Kordhi cufnaantaada murqaha
2.3 Sida loogu dedejiyo dheef-shiid kiimikaadkaaga cuntada
2.3.1 Cun marar badan maalintii
2.3.3 Is waraabi
Maxay dheef-shiid kiimikaadaygu gaabis u yihiin?
Miyaad leedahay aragti ah in dheef-shiid kiimikaadkaagu uu ka hawlgab yar yahay kan dadka kugu xeeran qaarkood? Waxaa laga yaabaa inaad sax tahay, tan iyo waxaa jira dheef-shiid kiimikaad dhaqso iyo gaabis ah. Laakiin maxay ku tiirsan tahay? Maxay dadka qaarkii u gubaan kalooriyo ka badan kuwa kale inkasta oo ay isku dadaal sameeyaan?
Hiddo-wadaha ayaa door ka ciyaaraya wax kasta oo aad tahay, iyo heerka dheef-shiid kiimikaadkaagu waa mid aan ka reebanayn. Qaarkood waxay nasiib u leeyihiin inay dhaxlaan dheef-shiid kiimikaad dhakhso leh, halka kuwa kale ay nasiib u leeyihiin xoogaa gaabis ah.
Si kastaba ha noqotee, inaad dhaxashay dheef-shiid kiimikaad awood u leh inaad gubto kalooriyo si xowli ah macnaheedu maahan inay weligeed sii jiri doonto. Waana taas shaqadani waxay u egtahay inay gaabiso hawshooda waxyar ka dib da'da 40.
Tani macnaheedu maahan in dheef-shiid kiimikaad aan la beddeli karin? Maya, dabcan waxaad sameyn kartaa waxyaabo aad "ku hagaajiso". Hadday tahay bakhtiyaa-nasiibka hidde-wadaha ama sannado badan oo aan kala joogsi lahayn darteed, waxaa jira caadooyin kaa caawin kara inaad dedejiso xawaaraha dabiiciga ah ee dheef-shiid kiimikaadkaaga isla markaana aad u hagaajiso shaqadiisa. Iyo ugu dambeyntii in la gubo kalooriyo badan, taas oo ah waxa asal ahaan ah marka su'aasha ah sida loo dedejiyo dheef-shiid kiimikaadka.
Istaraatijiyadaha lagu dedejinayo dheef-shiid kiimikaadka
Aynu aragno xeeladaha kuu oggolaan doona inaad xawaareyso dheef-shiid kiimikaadkaaga si aad si dhakhso leh ugu gubto kalooriyeyaasha.
Kordhi jimicsigaaga jimicsiga
Haddii aad rabto in dheef-shiid kiimikaadkaagu dhaqso u dhaqaaqo, waa inaad sidoo kale sameysaa, ugu yaraan markay tahay laylisyada jimicsiga: orodka, dabaasha, baaskiil wadista ...
Sideen ugu dari karaa xoog badan jimicsigeyga? Mid aad u fudud: uma baahnid inaad beddesho jimicsiga aad sameyneyso ama aad ku shaqeyso waqtiga oo dhan adigoo wata xoog. Sifudud isku qas jimicsi xoog leh oo fidiya jimicsigaaga jimicsiga, oo loo yaqaan 'interval Training'.
Kordhi cufnaantaada murqaha
Sidaad ogtahay, jidhku maahan oo keliya inuu ku gubo kalooriyada jimicsi, laakiin sidoo kale wuxuu sii wadaa inuu sidaas sameeyo inta aad nasan tahay. Laakiin tirada kalooriyada ku gubatay nasashada isku mid ma aha kiisaska oo dhan. Mid ka mid ah arrimaha ugu saameynta badan ayaa ah muruqyada qofka. Haddii aad maamusho inaad kobciso cufnaantaada muruqyada (taas oo ay lagama maarmaan tahay in la raaco tababarka xoogga wanaagsan) waxaad gubi doontaa kalooriyo ka badan sidii hore.
Tani waa sababta oo ah, marka la barbardhigo baruurta, jidhku wuxuu isticmaalaa qiyaastii saddex jeer kaloriinta si uu u ilaaliyo murqaha. Sidaa awgeed, haddii aad u baahan tahay inaad dedejiso dheef-shiid kiimikaadkaaga, samee tababar xoog ugu yaraan dhowr jeer usbuucii. Waxaad ku ogaan doontaa natiijooyinka muddada fog iyo maalmaha tababarka labadaba, maadaama culeysku uu dhaqaajinayo muruqyadaada iyo dheef-shiid kiimikaad ahaan.
Sida loogu dedejiyo dheef-shiid kiimikaadkaaga cuntada
Dabiici ahaan, waxa aad cunayso waxay si weyn saameyn ugu yeelan karaan heerka dheef-shiid kiimikaadkaagaMarka, sida waxyaabo badan, waxaad ku darto iyo waxaad ka tagto cuntadaada waa muhiim.
Cun marar badan maalintii
Haddii ay jirto caado loo arko mid lama huraan ah, waa in tirada cuntooyinka ay ka badan tahay oo tiradooda ka yar tahay. Tani waa sababta oo ah dheef-shiid kiimikaadkaaga ayaa gaabinaaya inta udhaxeysa cuntada, sidaas tixgeli inaad cunto cunno yar 3dii ilaa 4tii saacadood kasta si loo kordhiyo tirada kalooriyada aad gubto maalintii. Dhinaca kale, cunista cunno yar iyo kuwa waaweynba waxay kahortagi doontaa dheef-shiid kiimikaad dhaqso leh.
Barootiinku waa shay aan loo dulqaadan karin cunno kasta oo loo arko inay caafimaad qabto. Tani waxay sabab u tahay sababo dhowr ah, mid ka mid ah oo la xiriira shaqeynta dheef-shiid kiimikaadka. Dheefshiidka nafaqadani waxay ku lug leedahay gubasho kaloriin badan marka la barbar dhigo baruurta ama karbohaydraytyada. Xusuusnow inaad ku heli karto borotiin noocyada kala duwan ee hilibka, laakiin sidoo kale waxaa jira khudaar ku caawin karta, sida digirta.
Miyaad cabtaa biyo kugu filan? Fuuqbaxu ma aha saaxiibbo is-bedbeddelaya, waa wax iska soo horjeedda. Dhinaca kale, dhalada caadiga ah ee biyaha kaliya maahan waxa kaliya ee kaa caawinaya inaad biyo fadhiisato, sidaa darteed kahadalka dhowr muraayadood maalintii looma arko inay sax tahay. Waana lagama maarmaan in maskaxda lagu hayo in biyaha sidoo kale laga helo miraha, khudradda iyo cabbitaannada kale. Markaa haddii cuntadaadu hodan ku tahay kooxahan cuntooyinka ah, waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn inta koob oo biyo ah sida qof si dhif ah ugu shaqeeya hal tufaax maalintii.
Mid ka mid ah saameynta kafeega waa dardargelinta dheef-shiid kiimikaadka, marka waa khayraad xiise leh hadaad si fiican ugu dulqaadato. Si kastaba ha noqotee, waa inaad had iyo jeer si dhexdhexaad ah u shaqeysaa maxaa yeelay, kafeega iyo gaar ahaan cabitaannada tamarta (taurine-ka sidoo kale mararka qaarkood lagu daro), waxay sababi karaan dhibaatooyin u dhexeeya hurdo la'aan ilaa welwel, dhiig kar. Cabitaan kale oo xaqiijiyey inuu ku guuleystay daraasadaha ayaa ah shaaha cagaaran.
Ma jeceshahay cuntada basbaaska leh? Hadday sidaas tahay, waxaad samaynaysaa dheef-shiid kiimikaad aad u roon tahay, sida cunnooyinka iyo dhir udgoon leh tayadaani waxay leeyihiin awood ay ku xoojiyaan dheef-shiid kiimikaadkaaga oo aan kaa caawiyo, sidaa darteed, gubo kalooriyo badan maalintii.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Sida loo dedejiyo dheef-shiid kiimikaadka